Cayman Airways dia mandray ny Boeing 737 MAX voalohany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cayman Airways dia mandray ny Boeing 737 MAX voalohany
Boeing sy Air Lease Corp. androany no nanolotra ny 737 MAX 8 voalohany ho an'ny Cayman Airways. Ny MAX 737 voalohany niditra tao amin'ny serivisy tany Karaiba dia nanamarika ny fiandohan'ny tetikasan'ny kaompaniam-pitondrana hamolavola ny sambony sy hanitatra ny tamba-jotra.
"Cayman Airways dia afaka mahatratra ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fahombiazan'ny 737 MAX 8, miaraka amin'ny ambaratonga azo itokisana sy fampiononana tsy manam-paharoa," hoy ny filoha sady CEO an'ny Cayman Airways, Fabian Whorms. “Ho fanampin'izay, ny sakana tsy mampino an'ny MAX dia manokatra ny mety ho tsena vaovao marobe any Amerika.”
Cayman Airways dia mikasa ny hitondra fiaramanidina efatra MAX 8 hisolo ny fiaramanidina 737 Classics.
Raha ampitahaina amin'ny 737-300, ny MAX 8 dia manome 30 isan-jato ny fahafaha-manana seza 30 isan-jato ary fanatsarana mihoatra ny 1 isan-jato ny fahombiazan'ny solika isaky ny seza. Ny MAX dia mahatratra ny ambaratonga avo kokoa amin'ny haitao farany miaraka amin'ny motera CFM International LEAP-XNUMXB International, winglets Advanced Technology, ary fanatsarana ny airframe hafa.
"ALC dia faly manambara ity fandefasana Boeing 737 MAX 8 vaovao ity miaraka amin'i Cayman Airways anio," hoy i Steven F. Udvar-Hἁzy, filohan'ny mpanatanteraka ao amin'ny Air Lease Corporation. "Miaraka amin'ity MAX 8 vaovao ity sy ireo fiaramanidina telo fanampiny natokana hanafarana avy amin'ny ALC, Cayman Airways dia manamboatra modely tsara ny fiaramanidiny miaraka amin'ny fiaramanidina avo lenta sy haingam-pandeha haitao indrindra mba hanatsarana ny asan'ny zotram-piaramanidina ankapobeny, hampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary hitondra fenitra vaovao hatsarana ho an'ireo mpandeha mankao amin'ny Nosy Cayman. ”
"Faly izahay manokatra toko vaovao amin'ny fiaraha-miasa aminay Cayman Airways sy ALC, ary hitondra ny 737 MAX ho any Karaiba," hoy i Ihssane Mounir, filoha lefitra zon'ny Sales Sales & Marketing an'ny The Boeing Company. "Ny 737 MAX dia hanampy an'i Cayman hanana fanatsarana lehibe amin'ny fampandehanana sy ny vidin'ny asa, sady manome traikefa manidina tsara kokoa ho an'ireo mpandeha."
Hiomanana amin'ny 737 MAX vaovao azy ireo, Cayman Airways dia hampiofana mpanamory fiaramanidina ao amin'ny campus training any Boeing Global Services 'Miami. Ao anatin'ity fifanarahana ity dia hampiasa simulator Boeing i Cayman ho an'ny fiaramanidina 737 iray manontolo ao anatin'izany ny 737 Classics sy ny Next-Generation 737s.
Ny fianankaviana 737 MAX no fiaramanidina amidy indrindra amin'ny tantaran'i Boeing, nahangona kaomandy 4,800 avy amin'ny mpanjifa mihoatra ny 100 manerantany. Boeing dia nanatitra fiaramanidina 200 737 MAX mihoatra ny Mey 2017.
VIA Rail dia nitatitra ny fitomboan'ny mpandeha tamin'ny telovolana nisesy
Boeing dia nanatitra ny fiaramanidina faha-2,000 tany Chine